Tue, May 26, 2020 at 8:23pm
काठमाडौँ, २३ असोज दशैँको बिदा सकिएलगत्तै खुलेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ०.३९ विन्दुले घटेर एक हजार १४९.०१ मा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.०४ विन्दुले घटेर २५१.९३ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत सस्तोमा समेटिएको छ । कूल १२१ कम्पनीको दुई लाख..
काठमाडाैं, १६ असाेज । साताको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 'नेप्से' आज ८.६९ अंकले बढेको छ। बुधबार ४ अंकले घटेको नेप्से आज बढेको हो। ११४०.७१ अंकबाट कारोबार सुरु भएको आज ११४९.४० अंकमा पुगेर रोकिएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ सुचक पनि बढेको छ। सुचक २.१९ अंकले बढेर २५१.९७ अंकमा पुगेको हो। कारोबार अंकमा सुधार आएपनि कारोबार रकम भने बढेको छैन। दिनभरिमा १७..
काठमाडौँ, १५ असोज धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै पाँच अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से ४.९८ अङ्कले घटेर एक हजार १४०.७१ मा पुगेको छ । यसैगरी सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४३ अङ्कले घटेर २४९.७८ मा पुगेको छ । परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकममा पनि सुस्तता आएको छ । आज कूल १६१ कम्पनीका सात लाख ८५ हजार ७४०..
काठमाडाैं, १३ असाेज । लगातार ओरालो लागेको शेयर बजार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १०.४२ विन्दुले बढेर एक हजार १३५.५६ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ०.६८ विन्दुले बढेर २४७.०२ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से बढे पनि कारोवार रकममा भने खासै वृद्धि हुन सकेन । स्टकका अनुसार कूल..
काठमाडाैं, ११ असाेज । धितोपत्र बजारमा साता अपेक्षाकृतरुपमा बजारले गति लिन सकेन । निरन्तर ओरालो लागेको कारोवार मापनक नेप्से परिसूचक एक दिन मात्रै थामियो । अन्य दिन भने नेप्सेले आरोलो यात्रा नै कायम गर्यो । धेरैले यसलाई चाडबाडको असरका रुपमा समेत चित्रण गरेका छन् । चाडबाड शुरु हुन लागेका कारण नेप्से मात्रै नभई कारोवार रकममा समेत गिरावट आई बजार एक हजार १२९..
काठमाडौँ, ९ असोज । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकको ओरालो यात्रा आज पनि कायम रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १.७३ विन्दुले घटेर एक हजार १२९.८० विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.३९ विन्दुले घटेर २४७.३२ विन्दुमा सीमित भएको छ । नेप्से आरोलो लाग्दा कारोवार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको छ । कूल १६८ कम्पनीको सात लाख ९९ हजार १२८..
असोज ९, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज 'नेप्से'मा गण्डकी विकासको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ । बिहिबार बैंकले एक सूचना जारी गर्दै काराेबार राेक्का भएकाे सराेकारवालालाई सुसुचीत गराएकाे छ । मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्ने समझदारी पत्रमा असोज ८ गते हस्ताक्षरसँगै बिहीवारबाट गण्डकी विकास बैंकको नामबाट नेप्सेमा सूचिकृत २ करोड ७५ लाख साधारण शेयरको कारोबार रोक्का भएको हो । ..
काठमाडौँ, ८ असोज धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि पुनःओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३.०३ अङ्कले घटेर एक हजार १३१.५३ मा पुगेको छ । यसैगरी सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ०.७१ अङ्कले घटेर २४७.७० मा पुगेको थामिएको छ । परिसूचक घटेसँगै कारोवार रकममा पनि भारी गिरावट आएको छ । आज कूल १६६ कम्पनीको सात लाख ७७..
काठमाडौँ, ७ असोज । सोमबार सामान्य अङ्कले बढेको धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ६.४२ विन्दुले घटेर एक हजार १३४.५६ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.४० विन्दुले घटेर २४८.४१ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकममा समेत गिरावट आएको छ । कूल १७१ कम्पनीको आठ लाख..
काठमाडौं, ६ असाेज । सगरमाथा सेक्युरिटिज प्रालि 'ब्रोकर नम्बर १८' निलम्बनमा परेकाे छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीको काम गर्दै आएको 'ब्रोकर नम्बर १८' लाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले निलम्बन गरेको हाे। नेप्सेका अनुसार उक्त दलाल कम्पनीलाई १ दिनका लागि सदस्यता निलम्बन गरिएको हो।नेप्सेको निलम्बनपछि सगरमाथा सेक्युरिटिजले असोज ७ गते मंगलबार धितोपत्रको कारोबार गर्न पाउने छैन। धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोबार नियमावली २०५५ को व्यवस्था विपरीत..
काठमाडाैं, ५ असाेज । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार दाेहाेराे अंकले घटेकाे छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बजार कारोबार मापन गर्ने नेप्से सूचक १६ दशमलव ०५ अंकले घटेको हाे। त्यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक पनि आज दुई दशमलव ४९ अंकले घटेको छ। बजारमा कुल १ सय ६६ कम्पनीको आठ लाख ४८ हजार ६ सय ६२ कित्ता सेयर बिक्री..
काठमाडौँ, ४ असोज धितोपत्र बजारमा यस साता कारोवार उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो । साताको शुरुका दुई दिन र अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले घटेको बजार कारोवार मापक नेप्से झण्डै एक हजारको विन्दुमा पुग्न लागेको थियो । तर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारी सञ्चयकोषको ५८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शेयर बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको प्रतिक्रिया दिनु भएपछि नेप्से मङ्गलबार र बुधबार..
काठमाडाैं, ३ असाेज । साझा यातायातमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकाे सेयर भएकाे खुलेकाे छ । यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार कुल सेयर रकम ३ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकाे साझा यातायातमा २ सय २७ जनाको सेयर रहेकाे छ । साझामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिको सेयर छ। ती २ सय २७ जना सेयर सदस्यमध्ये पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह..
काठमाडौँ, २ असोज । शेयरबजारमा सामूहिक लगानीका लागि महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा रहेको सामूहिक लगानी कोष योजना (म्युचअल फण्ड)अन्तर्गत थप दुई बैङ्कले २० करोड इकाइ बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैङ्कले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ‘ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड–१’ र लक्ष्मी बैङ्कले प्रवद्र्धन गर्ने ‘लक्ष्मी उन्नति कोष’ बिक्रीका लागि तयारी गरिएको हो । बोर्डमा छलफलका क्रममा रहेका ती..
काठमाडौँ, १ असोज धितोपत्र बजारमा मङ्गलबार झण्डै २७ अङ्कले उकालो लागेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि सोही लयमा अगाडि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २२.६३ अङ्कले बढेर एक हजार १७३.४२ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि १.६४ प्रतिशत अर्थात् ४.१३ अङ्कले वृद्धि भई २५५.७० मा पुगेको छ । आज कूल १७१ कम्पनीका..
काठमाडौँ, १ असोज । अघिल्लो दुई दिनमा ३४ अंक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक मंगलबार २६.९१ अंक बढेर ११५० दशमलव ७४ अंकमा पुग्यो। यसरी सेयर बजारमा ‘बाउन्स ब्याक’ देखिनुको कारण अरु केही नभएर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको भाषण हो। मन्त्री खतिवडाले सेयर बजार घटेको बेला लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने उचित समय भएको बताएका थिए। मंगलबार बिहान कर्मचारी सञ्चय कोषको वार्षिकोत्सवमा मन्त्री खतिवडाले..
काठमाडौं, ३१ भदाै । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयरबजार बारे सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएसँगै बजारमा एकाएक सुधार आएकाे छ । खतिवडाले वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर बजारमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन पनि सेयर बजारमा लगानी बढाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई सचेत गराएका थिए ।उनकाे यस्ताे अभिव्क्तिसँगै सेयर बजारमा दुई घण्टामा २८ अंकको सुधार आएकाे हाे । यस्तै उनले बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको नाफा बढेको, आर्थिक वृद्धि भइरहेको तथा राजनीतिक..
काठमाडौं, ३१ भदाै । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर बजारमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन पनि सेयर बजारमा लगानी बढाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् । कर्मचारी संचय कोषको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर पनि बढेको तथा राजनीतिक स्थायित्व..
काठमाडौँ, ३० भदौ नागरिक लगानी कोषले आफ्ना शेयरधनीलाई २२ प्रतिशत शेयर लाभांश र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कोषको आज यहाँ सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणभाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आयव्ययसमेत पारित गरेको छ । साधारणसभामा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र भट्टराईले आव २०७४÷७५ को प्रतिवेदन..
काठमाडौं, भदौ ३० । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कूल चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत साधारण सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि एउटा शर्त भने तत्कालका लागि अगाडि सारेको छ । त्यो भनेको सञ्चित घाटा घट्नुपर्नेछ । अर्थात, हाल प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । नाफा बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी २ वर्षभित्र प्राधिकरणको सञ्चित घाटा शुन्यमा..
काठमाडौँ, २९ भदौ साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७.८७ विन्दुले घटेर एक हजार १४०.०१ विन्दुमा पुगेको छ । प्रतिशतका आधारमा आज १.५४ प्रतिशतले घटेको हो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ३.७९ अङ्क अर्थात् १.४९ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा कारोवार रकम..
बैंकक, २७ भदौ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार वार्ता पुनः शुरु हुने समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै शुक्रबार एसियाली शेयर बजारमा सुधार आएको छ । जापानको निक्की २२५ मा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २१,९८९.२९ विन्दुमा पुगेको छ भने हङकङको हाङ सेङ पनि ०.६ प्रतिशत वृद्धि भई २७,२६२.८० विन्दुमा पुगेको छ । सिड्नीको एसएन्डपी एएसएक्समा पनि सुधार भई ६,६६९.२० विन्दुमा पुगेको छ । शाङ्घाई, ताइवान र..
काठमाडाैं, २६ भदाै । निरन्तर ओरालो लागेकाे सेयर बजार आज पनि ५.५३ अंकले घटेकाे छ । नेप्से साताको पहिलो दिन आइतबार १२.६१ अंक, सोमबार ९.५४ अंक, मंगलबार २.२४ अंक र बुधबार ३.४६ अंकले ओरालो लागेको थियो। यो साता नेप्से ३३.३८ अंकले घटेको छ। निरन्तर ओरालो लागेर नेप्से ११५७.८८ अंकमा आइपुगेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक ३४.२५ अंक, होटल समूहको उपसूचक २४.५३ अंक, जीवन..
काठमाडौँ, २२ भदौ साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२.६१ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८.४६ मा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.७७ बिन्दुले घटेर २५७.१३ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से घटेपछि कारोवार रकम पनि सामान्य नै रहेको छ । आज कूल १६५ कम्पनीको ११ लाख..
काठमाडौं, १८ भदौ । साताको शुरुआती दुई दिन लगातार दोहोरो अङ्कले गिरावट आएर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको धितोपत्र बजारले आज लगानीर्तामा केही आश जगाएको छ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार र बुधबार भने लगानीकर्तामा उत्साह भर्ने ढङ्गबाट उकालो लागेको छ । मङ्गलबार झण्डै २० अङ्कले बढेको नेप्से आज ३.८७ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार १९४.७७ पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ..
काठमाडौँ, १७ भदौ धितोपत्र बजारमा आइतबार र सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज भने दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २०.५७ विन्दु अर्थात् १.७६ प्रतिशतले बढेर एक हजार १९०.९० विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.९३ विन्दु अर्थात् १.५३ प्रतिशतले बढेर २६०.२३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से बढेसँगै कारोवार रकममा समेत वृद्धि..
एजेन्सी, १७ भदौ भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणको टिमले ठूला लगानीकर्तालाई अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्यो त्यसले उनीहरुको निर्णयलाई गलत सावित गरिदियो । जसका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । नोक्सानी बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज र नेसनल स्टक एक्सचेञ्जसँगै सेन्सेक्स र निफ्टीमा यो निर्णयले ४९ दिनदेखि खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ । र, गत अगस्ट महिनामा भारतीय रुपैयाँ एसियामा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । भारतमा सेयरको..
काठमाडौँ, १६ भदौ सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो । कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ । सञ्चार..
काठमाडौँ, १५ भदौ नेपाल राष्ट्र बैंकले रु आठ अर्ब ६५ करोड ५० लाख बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको उक्त ट्रेजरी बिलमध्ये रु तीन अर्ब १३ करोड ९१ दिने अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल आगामी मङ्सिर १७..
शनिबार, भाद्र १४, २०७६ साल
काठमाडौँ, १४ भदौ धितोपत्र बजारमा यस साता कूल १७२ कम्पनीको शेयर कारोवार भयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रह्योे । यसै साता बजार ओरालो लागेर एघार सयको बिन्दुमा झरेको छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नकारात्मकतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै बजार ओरालो लागेको बताइँदै आएको छ । कारोवार रकम र नेप्सेको अवस्थाले पनि सोही कुरालाई इङ्गित गरेको..
Results 589: You are at page3of 20